Orambaratra teto Antananarivo: zaza iray lasan’ny rano, dibo-drano ny arabe, nidaraboka ny takelaby | NewsMada
Orambaratra teto Antananarivo: zaza iray lasan’ny rano, dibo-drano ny arabe, nidaraboka ny takelaby
Nazeran’ny rivotra nifofo ireo hazo sy takelaby. Dibo-drano ny faritra maro teto an-drenivohitra. Arabe maro no tsy azo nodiavin’ny olona sy ny fiara. Rava ny tsena maro. Nisy zaza iray lasan’ny rano teny Andraisoro, sns. Mavesatra ny fahasimbana tao anatin’ny ora vitsy nandalovan’ny oram-baratra.
Nirotsaka ny orambaratra, omaly tolakandro, na efa niomana ihany aza ny maro satria nilaza ny teknisianina eny Ampandrianomby fa hiverina ny orambaratra amin’ny afovoan-tany, tojo olana ny ankamaroany vokatry ny fiakaran’ny rano vetivety teny amin’ny arabe. Nisy ny zaza iray teny Andraisoro voalaza fa lasan’ny rano ary tsy mbola hita tamin’ny fotoana nanoratana omaly hariva. Ankoatra ny famoizana aina , niteraka fahasimbana betsaka teto Antananarivo ny orambe nirotsaka omaly. Betsaka ny takelaby misy dokambarotra nianjera noho ny herin’ny rivotra, ravan’ny tafiotra sy ny orana avokoa tao anatin’ny fotoana fohy ny ankamaroan’ny tranovy fivarotana eny amin’ny tsenan’i Mahamasina..
Teny amin’ny tsenan’Ambohijatovo, nentin’ny riaka nidina aty amin’ny toerana ambany ny entana rehetra (legioma samihafa, voankazo) fa lasa nialoka ny mpivarotra. Tsy nanampo ny herin’ny riaka sy ny habetsahan’ny rotsak’orana ny maro satria tao anatin’ny ora iray monja, dibo-drano avokoa ny arabe ary efa nanasaka ny fiara madinika ny haavon’ny rano.
Tsy vitsy ny fiara madinika tafahitsoka tao anaty ranobe ka natosika fotsiny. Ny mpandeha an-tongotra, mirobo-drano avokoa manaraka ny sisin-dalana miala ny lavaka mety ho fandrika. Nitohona tanteraka koa ny fifamoivoizan’ny fiara rehetra.
Sahirana indray ny mponin’Antananarivo, indrindra ny amin’ny faritra ambany (i Besarety, Ampefiloha, Antanimena Ambany, Ambanidia… ) fa tonga nivatravatra ny orana. Tsy mbola voatampina ny lavaka navelan’ny orana ny amin’ny arabe tamin’ny fiandohan’ny taona, manampy trotraka sahady ny ranobe, omaly.
Mitaintaina sahady ny tompon’ireo trano miorina amin’ny faritra mena amin’ny tanàna avo ka nilaozana fotsiny. Sao hampihotsaka vato na ranontany vaovao ity orambe ity. Fianakaviana maromaro no efa nandao ny tokantranony nifindra eny amin’ny havana na mialokaloka eny amin’ny efitranoben’ny INFP Mahamasina na ny toeram-pandraisana nomanin’ny fanjakana.
Olana miverina isaky ny fahavaratra ny ranobe miandrona tsy misy ivarinany eto Antananarivo ka tafiditra an-tokantrano mihitsy. Niezaka nanadio ny lakandrano sy ny tatatra samihafa ny tomponandraikitra fa tsy maharaka ny fiboiboikan’ny ranon’orana ka tondraka ihany ny faritra iva. Nanambara ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa tsy hahazo orana ny faritra Analamanga fa ho maina indray ho an’ny anio.
Mbola arahi-maso ilay rivodoza Gelena
Nitombo hery hatrany ireo rivodoza ao amin’ny ranomasina Indianina. Omaly maraina tamin’ny 9 ora, tany amin’ny 470 km atsinanan’Antsiranana ny nisy ny rivodoza Gelena. Niakatra 120 km isan’ora ny rivotra entiny arahina tafiotra mahatratra 170 km isan’ora. Tsy nihetsika loatra izy tao anatin’ny 12 ora lasa. Tombanana hikisaka mianatsimo atsinanana kosa izy nanomboka omaly ka hanalavitra ny morontsiraka malagasy.
Noho izany, foana ny filazana loza miloko maitso voarain’ireo faritra sy distrika voakasik’izany. Mitohy ny fanaraha-maso an’i Gelena.
Any amin’ny 1 760 km atsinanan’i Toamasina ny misy ilay ridodoza Funani izay mitondra rivotra mahatratra 160 km isan’ora sy tafiotra 220 km isan’ora manodidina ny foibeny. Mizotra mianatsimo atsinanana ny diany ka mahafaka 15 km isan’ora. Iangaviana ny mpampiasa ranomasina amin’ny morontsiraka avaratra atsinanana hitandrina noho ny onja mahery aterak’i Gelena mety mahatratra 2 m.